खाद्य स्वच्छता अभियानमार्फत ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ गर्ने प्रयास हुन्छ | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » खाद्य स्वच्छता अभियानमार्फत ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ गर्ने प्रयास हुन्छ
खाद्य स्वच्छता अभियानमार्फत ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ गर्ने प्रयास हुन्छ
महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
यो चालु आर्थिक वर्षभरि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान २०७५ सञ्चालन गरेको छ । यसअघि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि राष्ट्रिय स्वच्छता दिवस २०७५ मनाएको थियो । विभिन्न नाममा बेला बेलामा खाद्य स्वच्तताका लागि गतिविधिहरु भइ नै रहन्छ तैपनि खाद्यवस्तुमा अस्वस्थकर वस्तुहरु भेटिरहन्छ । दुध, पानी र तेलमा केन्द्रीत रहेर एक वर्षसम्म सञ्चालित रहने यो अभियानको औचित्य के, यसबाट उपभोक्ताले के फाइदा पाउँछ । राज्यलाई यसबाट फाइदा हुन्छ लगायतका विषयमा सहारा टाइम्सका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसँग गरिएको कुराकानीमो सम्पादीत अंशः
सरकारले यो चालु आर्थिक वर्ष अवधिभर खाद्य स्वच्छता गुणस्तर अभियान २०७५ मनाउने भएको छ यसको उपलब्धता र उद्देश्यको बारेमा बताई दिनुहुन्छ ?
–हामीले यसअघ राष्ट्रिय स्वच्छता दिवस मनाएका थिर्यौ । दिवस एकदिनका लागि मनाइन्छ । दिवस प्रत्येक मनाइन्छ तर अभियान विशेष अवस्था र परस्थितिमा मनाइन्छ । कुनै कुराको विशेष जानकारी दिन वा सचेतना फैलाउनका लागि अभियान सञ्चालन गरेको छ । र यसपटक पनि खाद्य स्वच्छताको बारेमा उपभोक्तामा चेतना फैलाउनुको साथै खाद्य स्वच्छताप्रति सचेतनाका लागि कार्यक्रम गरिन्छ र उपभोक्तामा खाद्यवस्तु स्वच्छ कसरी खाने, खाद्यवस्तु स्वच्छ कसरी उत्पादन गर्ने, कसरी बेच्ने लगायतका जानकारी दिनेछ । जनचेतना खाद्य स्वच्छाको प्रमुख अंग हो । आमनागरिक स्वच्छता बारे सचेत रहेन भने स्वास्थ्यमा असर गर्छ र समाजलाई नराम्रो असर गर्छ । यसमा सचेतनादेखि लिएर नियमन र कार्यवाहीसम्मको काम हुनेछ । हामीले विभिन्न प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरियौं र त्यसबाट हामी यो निष्कर्षमा पुग्यौं कि यो सानोतिनो कुराले खाद्यवस्तुको गुणनियन्त्रण हुनसक्दैन । र, यसलाई अभियान मार्फत जानुपर्छ ।
यो वर्षभरिको अभियानका के के क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ त ?
–यो अभियानमा तीनवटा खाद्यवस्तुलाई टार्गेट गरेका छौं । प्रशोधित खानेपानी, प्रशोधित दुध र खानेतेलमा विशेष निगरानी गछौं यो अभियानको अवधिमा । हाम्रो अध्ययनका आधारमा अहिले यी तीन वस्तु अखाद्यवस्तुको रुपमा उच्च जोखिममा रहेको छ । यसमा बढी मिसाबटहरु भेटिएको छ । त्यसैले अभियानकै रुपमा यसलाई नियन्त्रण गर्न लागेका हौं । अभियानको अवधिभरि यसले तीनवटा काम गर्नेछ । पहिलो काम यसले उपभोक्ता तथा व्यपारीहरुमा सचेतना बढाउने काम गर्छ । उपभोक्तामा सचेतनाको निकै अभाव देखिएको थियो । होटल व्यवसायी, उद्योगीहरुमा पनि सचेतनाको अभाव देखिन्छ । उनीहरुलाई सचेत गराउने काम पनि हुन्छ । अर्को हो क्षमता अभिवृद्धिको कुरा । कतिपय व्यक्तिहरुले उद्योग खोलेका छन् तर त्यसलाई मापदण्डको बारेमा छैन । कुनवस्तु कसरी उत्पादन गर्ने त्यसलाई कसरी राख्ने त्यसको बारेमा जानकारी छैन । उनीहरुलाई तालिम दिने काम पनि हामी गर्छौ । त्यस्तै अनुगमनमा जाने कर्मचारीहरुलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिने काम गछौं । प्रयोगशालालाई कसरी आधुनिकरण र प्रविधियुक्त बनाउने त्यसमा पनि ध्यान दिन्छौ । तेस्रो हो नियमन । दिवसमा नियमनको काम हुँदैन तर यसमा नियमनको काम पनि हुन्छ । अभियानको क्रममा अनुगमन गर्ने काम हुन्छ । कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई कारवाही गर्ने काम पनि अभियानकै क्रममा हुन्छ । यसक्रममा विभिन्न निर्देशिकाहरु बनाउने काम मात्र होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने काम पनि गर्छौं । यी तीनवटा काम भएपछि पानी, दुध र तेलमा उलेख्य सुधार आउने अपेक्षा हामीले लिएका छौं ।
नियमित अनुगमन तथा नियमन भइरहन्छ तर अभियान नै किन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो त ?
–अनुगमन र नियमनबाट पनि केही सुधार भएको छ । तर जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन । जहिले पनि १५ देखि २० प्रतिशत मिसाबट देखि नै रह्यो । उलेख्य सुधार आएन । अखाद्यवस्तुमा धेरै वृद्धि पनि भएको छैन, धेरै सुधार पनि भएको छैन । उलेख्य मात्रामा घट्नु पथ्र्यो त्यो घटेन हाम्रो चिन्ताको विषय त्यो हो । शुन्य त कही पनि हुँदैन तर झर्नुपर्छ एक दुई प्रतिशतमा गएर बस्नुपर्छ तर यहाँ १५–२० प्रतिशत रहेको छ । अब त अभियान नचलाईकन भएन भनेर नै हामी यस्तो गरेका हौं । हाम्रो समाजमा स्वस्थ्य खाने कुरा कसरी खाने, त्यसलाई कसरी उत्पादन गर्ने, कसरी विक्रि वितरण गर्ने त्यसको बुझाईमा धेरै नै कमी छ । अर्को कुरा ऐन कानुन र निर्देशिकाको अभाव छ । पुरानो ऐन कानुनहरु छन् । त्यसबाट काम गर्नुपरेको छ भएका ऐन कानुन र निर्देशिकाहरु कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यसले पनि क्वालिटी कन्ट्रोलमा समस्या देखिएको छ । विभागमा विभिन्न जनशक्तिको अभाव छ ।
यो अभियानमा जनशक्ति निर्माण गर्नुदेखि लिएर निर्देशिका तथा कानुन निर्माण जस्ता काम हुन्छ त ?
–यो अभियानको अवधिमा व्यपक सचेतनाको लागि काम गर्नेछौं । प्रशिक्षण दिनुदेखि लिएर गाउँगाउँ, सहर सहर गएर चेतनाको विकास गर्ने काम गर्छौ । यो आर्थिक वर्षको अवधिमा ऐन कानुनको काम पनि पुरा गर्ने प्रयास गर्छौं । विभिन्न निर्देशिकाहरु बनेको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास हुन्छ । जनशक्ति पनि माग गरिएको छ । अभियानकै क्रममा त्यो पनि पूरा होस् भनि हाम्रो चाहना छ ।